Apple ထက် Market Share ပိုများလာတဲ့ Samsung Exynos
Apple ကို ကျော်တက်ပြီး တတိယအဆင့် Market Share ပိုင်ဆိုင်သူ ဖြစ်လာတဲ့ Samsung Exynos
အင်အားကြီး Mobile Chipset Maker တွေဖြစ်တဲ့ Apple ၊ Samsung တို့ရဲ့ 2020 ပွဲစဥ်ရာသီကတော့ COVID-19 ဒိုင်နဲ့ ကြည့်ကောင်းနေပါပြီ။ ဗိုင်းရပ်စ်မွေလို့ တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းတာနဲ့ပါ ရောင်းအားကျဆင်းနေတယ်။
Samsung လည်း Galaxy S20 စီးရီး ရောင်းအား မကောင်းဘူးလို့ ငြီးတွားနေသလို မတ်လထဲမှာ ထွက်ရှိလာမယ်ဆိုတဲ့ iPhone9စီးရီးလဲ အရိပ်သာပြပြီး အကောင်မမြင်ရသေးဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း ပထမ သုံးလပတ် (ဇန္နဝါရီ ၊ ဖေဖော်ဝါရီ နဲ့ မတ်) တို့ ကုန်ဆုံးတော့မယ်ဆိုတော့ နောက်အသုတ်တွက် ပြင်ရတော့မယ်။
ဗိုင်းရပ်စ် မွေလို့သာ မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်ခဲ့ဘူးလို့ ပြောကောင်းပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာ Mi 10 Series ၊ Sony One Mark II နဲ့ OPPO Find X2 လို Flagship ဖုန်းတွေ မိတ်ဆက်ခဲ့ကြသလို 26 ရက်ဆိုရင်ပဲ HUAWEI ရဲ့ P40 Series လာဦးမယ်။
ဒီအလုံးတွေက Flagship တွေ ဆိုထားပါတော့။ Mobile Chipset တင်ပို့တဲ့အထဲမှာ Exynos တွေ တတိတယ နေရာရောက်လာတာလဲ? Counterpoint Research က ထုတ်ပြန်တဲ့အတိုင်း လေ့လာကြည့်ရအောင်။
ကျွမ်းကျင်သူတွေအဆိုရ 2019 ဒီဇင်ဘာလအထိ Exynos Chipset တွေ 14.1% Market Share ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး 2018 (11.9%) အတိုင်းတာနဲ့ ယှဥ်ကြည့်ရင် 2.2% ထက် ပိုများလာတာပါ။ရှယ်ယာများလာတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက မြောက်အမေရိကနဲ့ အာဖရိကမှာ ကြီးထွားလာတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလို Share ကိစ္စ အပြိုင်ဖြစ်နေချိန် ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် 0.5% ထိုးဆင်းသွားပြီး 13.1% ရှယ်ယာနဲ့ စတုတ္ထနေရာကနေ ရပ်တည်နေတာ Apple ပါ။ Counterpoint အရ Samsung နဲ့ HUAWEI တို့တတွေဟာ 2019 ရာသီနဲ့ 2020 နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ အပေါင်းလက္ခဏာပြနေတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေလို့ သိရတယ်။
ကံအားလျော်စွာနဲ့ အမေရိကန် အစိုးရဖိနှိပ်မှုတွေက မရုန်းနိုင်သေးတဲ့ Kirin တွေကတော့ ပဥ္စမနေရာနဲ့ ကျေနပ်လိုက်ရပြီး ပထမနဲ့ ဒုတိယ လိုက်နေသူတွေက ဘယ်သူတွေ ဖြစ်မယ်ထင်လဲ? လက်ရှိ စျေးကွက်ထဲမှာ ရောင်းချနေတဲ့ Mid-range ဖုန်းတွေမှာ သူတို့နှစ်ယောက် အပြိုင်ဖြစ်နေတယ်။
Qualcomm still leads
Market Share အများဆုံးနဲ့ ရပ်တည်နေသူတွေက Qualcomm နဲ့ MediaTek ပဲ ဖြစ်ပြီး 33.4% နဲ့ 24.6% အသီးသီး ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ MediaTek က Samsung ကိုပါ ကျော်တက်ပြီး Second Position ရောက်သွားတာလဲ?
ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ တန်ဖိုးသင့် Budget ဖုန်းတွေအပြင် Mid-range Level မှာပါ 5G Integrate လုပ်သွားတဲ့ အကွက်ကြောင့်လို့ ပြောပါတယ်။ Qualcomm ကိုပဲ စွဲစွဲမြဲမြဲ သုံးလာတဲ့ OnePlus ကိုပဲ ကြည့်လေ 8 Series မှာ MediaTek Dimensity Chipset သုံးမယ်လို့ သတင်းထွက်လာတယ်။
ဒါ့အပြင် ဂိမ်းသရဲတွေအတွက်လည်း စျေးနှုန်းချိုသာတဲ့ Gaming Chipset ထည့်ပေးလာတာကြောင့် ဝယ်လိုအားများလာတယ် ထင်ပါတယ်။ Samsung အနေနဲ့လည်း Exynos Chip တွေကို Galaxy ဖုန်းတွေမှာပဲ သုံးတယ်လို့ သိထားရပေယ့် 2020 မှာ Client အသစ်ရထားတယ်။
X30 Series ဖုန်းတွေမှာ Exynos 980 Chipset သုံးလာတာ အစွဲပြုလို့ Vivo ရဲ့ Mid-range Smartphone တွေမှာ Samsung ရဲ့ 5G Exynos Chip တွေ သုံးလာနေပြီ။ ပြောရမယ်ဆိုရင် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေပြီပေ့ါ။
2019 နှစ်ကုန်ခါနီးမှာ Texas ပြည်နယ်မှာ စက်ရုံတည်ထားတဲ့ Custome Mongoose Cores ထုတ်လုပ်မှုကို အပြီးတိုင် ရပ်နားပစ်လိုက်ပြီး ARM Cores နဲ့ပဲ အစားထိုးမယ်လို့ ကြေညာသွားတယ်။ အဲ့ဒါအပြင် Mali GPU အစား Radeon Chip သုံးလာဖို့ AMD နဲ့ Collaborate လုပ်ထားပြီး New Exynos Chip တွေကို 2020 နောက်ပိုင်းမှာ မြင်တွေ့လာရမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
K30 Pro 5G ကို Price-to-Performance ချန်ပီယံလို့ တင်စားရင် ကောင်းမလား?